Amathuba amavolontiya - Galveston County Food Bank
Ngaba ujonge ukubuyisela eluntwini?
Zivolontiye namhlanje ukwenza umahluko kubomi babamelwane bakho!
Cofa ithuba lokuvolontiya kuluhlu olungentla ukuze ubhalise!
Khuphela iFomu yokuKhutshwa kweTyala lamaVolontiya
Ufuna uncedo? Tsalela umnxibelelanisi wethu wamavolontiya ngolwazi oluthe vetshe ku (409) 945-4232 okanye nge-imeyile apha volontiya@galvestoncountyfoodbank.org.
INkundla iyalele iNkonzo yoLuntu
Zeziphi iintlawulo ezingamkelwayo?
I-GCFB ayamkeli iziyobisi, ubusela, okanye ulwaphulo-mthetho olunobundlobongela.
Ngaba kukho umda wobudala?
Isithintelo seminyaka sibonakalisiwe kwiimfuno zamavolontiya e-GCFB (11+)
Ngawaphi amaphepha afunekayo?
Amaphepha okuqala avela kwiNkundla kunye / okanye kwiGosa lokuLinga kufuneka linikezelwe kuMququzeleli wamaVolontiya ukuqinisekisa izityholo kunye nokwenza ikopi ukuze ibekwe kwifayile yabasebenzi.
Nceda ugcwalise le fomu ingezantsi.
INkundla ichonge isiVumelwano seNkonzo yoLuntu 2020
Ngubani onokuqhagamshelana naye malunga nenkonzo yoluntu?
Nxibelelana noMququzeleli wamaVolontiya nge-imeyile, Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org okanye umnxeba 409-945-4232.
Ngaba ikhona enye into efunekayo?
Onke amavolontiya aNyulwe yiNkundla kulindeleke ukuba eze e-ofisini ngobuqu ukuze kuqhelaniswe noqeqesho. Ukuqhelaniswa kubandakanya ukugcwalisa iFom yeNkonzo yoLuntu, ukusayina i-GCFB Waiver, ukudala i-Sign-In Sheet, kunye noqeqesho ngendlela yokubhalisela iishifti.
Ngaba zikhona iimfuno zekhowudi yokunxiba?
Akukho mpahla ikhululekileyo okanye ingxowa
Akukho zacholo zilengayo (izacholo zomtsalane, izacholo zomqala ezinde okanye amacici)
Akukho ziflops, iimbadada okanye izihlangu ezityibilikayo
Akukho zihlangu zingabuyiyo (ex: iimeyile)
Izicathulo zeenzwane ezivaliweyo kuphela
Akukho sherhe okanye impahla etyhilayo
Ihempe ezinemikhono kuphela
Akukho ziqwenga zetanki, umphezulu we-spaghetti strap, okanye i-topless strapless.
Yintoni efunekayo ukucwangcisa ithuba lokuzithandela leqela?
Gcwalisa ifom yokuthatha inxaxheba yamavolontiya kwaye uyingenise kuMququzeleli wamaVolontiya ukuze yamkelwe.
IFomu yokuThatha inxaxheba yamaVolontiya eQela
Ngaba zikhona ezinye iifom ezifunekayo?
Umntu ngamnye okweli qela kufuneka azalise ifom yokurhoxa ngokuzithandela.
Ifom yokuKhululwa kweTyala ngokuzithandela
Bangaphi abantu abathathwa njengeqela?
Abantu aba-5 okanye nangaphezulu bagqalwa njengeqela.
Bungakanani ubukhulu bamaqela ovumelekileyo?
Ngeli xesha, akukho bukhulu bukhulu bamaqela kodwa iya kwahluka ngokufumaneka okuvulekileyo. Ukuba kukho iqela elikhulu ngokwentelekiso, siza kulihlula iqela ngokwamaqela amancinci ukuncedisa kwiindawo ezinesidingo (okt, indawo yokutya, ukuhlela, i-Kid Pacz, njl.
Amavolontiya kufuneka abe neminyaka eli-11 ubudala okanye ngaphezulu.
Sifuna ubuncinci umntu emdala / umntu obaphetheyo kwishumi ngalinye labantwana. Abantu abadala / abampelekiyo kufuneka babeke esweni abantwana ngalo lonke ixesha.
Kuthekani ukuba iqela lam alikwazi ukuya kumhla wethu wokuzithandela?
Nceda uthumele i-imeyili kumququzeleli wamavolontiya ngokukhawuleza ukukhulula loo mabala, ukuze abanye bakwazi ukuzithandela nathi.
Ukuvolontiya komntu ngamnye
Ngaba ukungena-ngaphakathi kwamkelekile?
Ewe, amavolontiya angena ngaphakathi amkelekile ngolwesiBini-Lwesine nge-9 kusasa ukuya nge-3 ngokuhlwa nangolwesiHlanu nge-9 kusasa ukuya nge-12 ngokuhlwa.
Nceda uqaphele ukuba amabala wethu amavolontiya agcwalisa ngokukhawuleza kwaye kukulungele ukucwangcisa i-intanethi.
Cofa apha ukuze ubhalise
Amavolontiya kufuneka abe neminyaka eyi-11 nangaphezulu. Abantwana abaneminyaka eyi-11 ukuya kwe-14 kufuneka babe nomntu omdala okhoyo ngelixa bevolontiya. Abantwana ababudala buli-15 – 17 kufuneka babe nemvume yabazali/yomgadi kwifomu yokuvolontiya, kodwa akufuneki ukuba umntu omdala abekho.
Ifom yeVolontiya yokuHlawula uxanduva
Samkela iintsuku zeqela lamavolontiya! Singacwangcisa abasebenzi bakho, iqela lecawe, iklabhu okanye umbutho ngesicelo. Jonga imihla evulekileyo kwiphepha lethu leGolide kwaye ukuba ayihambelani neshedyuli yakho sithumele i-imeyile ukuze ubone ukuba yintoni enokusetwa kwiqela lakho.
Cofa apha ukukhuphela iFomu yokuThatha inxaxheba yamaVolontiya eQela
Sinokuhanjiswa kokutya kwi-pantry yethu ekwisiXeko saseTexas rhoqo ngoLwesibini, ngoLwesithathu, ngoLwesine ukusuka nge-9am ukuya kweyesi-3pm nangoLwesihlanu ukusuka nge-9am ukuya kweye-12pm. Sidla ngokufuna amavolontiya ali-10 ukuba ancedise kwindawo yokuphumla. Amavolontiya ethu afuna utshintsho rhoqo, ngoko ke nceda ujonge iphepha lethu leGolide rhoqo.
Kukho iindawo zokuzithandela zangoMgqibelo ezivulekileyo ukusuka nge-9 kusasa ukuya kwi-12 ngokuhlwa. Nceda ubhalise kwangaphambili. Sithanda ukuba namavolontiya angama-20 ngeempelaveki. I-2nd NgoMgqibelo wenyanga nganye silungiselela iibhokisi eziKhaya, eziphuma ziye kubantu abadala nabakhubazekileyo abangakwaziyo ukuza kuthi ngeenkonzo zethu.
Sinikezela ngokuvolontiya kweSiqithi kunye neKholeji yaseGalveston-Inkqubo yokutya yokucinga. La mavolontiya kufuneka agqibe ukukhangela ngaphandle kwendleko. Oku kufuneka kugqitywe kwiintsuku ezi-3 phambi komhla wokuvolontiya. Nceda unxibelelane noMququzeleli wamaVolontiya kwifom yokujonga ngasemva, volontiya@galvestoncountyfoodbank.org
Nceda ujonge iphepha lethu leGolide ku-Epreli ukuya kuJuni ukuncedisa ngenkqubo yethu yokutya yasehlotyeni yabantwana be-Kidz Pacz.
Ukuba unesibindi sokusoyikisa, sinamathuba okuvolontiya e-Haunted Warehousehouse ngenyanga ka-Okthobha. Nxibelelana noJulie Morreale ku Julie@Galvestoncountyfoodbank.org
Sijoyine ekukhokeleni umlo wokuphelisa indlala eGalveston County.